January 3, 2022 - Online Hartha
“မှေးနေ့ သောကွာ တနင်ျလာ ကသောဆံဖွတျမပွုအပျ”အဓိပ်ပါယျ ရှငျးလငျးခကျြ…
January 3, 2022 by Online Hartha
မွေးနေ့ သောကြာ တနင်္လာ ကေသာဆံဖြတ်မပြုအပ်” တကယ်တော့ အဲ့တာက တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မွေးနေ့ ၊ အညွှန့်နေ့ နဲ့ ဆပွတ်နေ့ အတွက်ပါ။ လူတိုင်းအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီ့လို လူတိုင်းအတွက်သာဆို ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေ တစ်ပါတ်မှာ( ၃)ရက်လောက် အလုပ်ပိတ်ရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲကြတဲ့သူတေဒုနဲ့ဒေးရှင်းပြဦးမှပါလေ အတိုကောက် မွေးနေ့ 👉 မိမိမွေးသည့်နေ့နံ သောကြာ👉 အညွှန့်နေ့ တနင်္လာ 👉 ဆပွတ်နေ့ အညွှန့်နေ့နဲ့ ဆပွတ်နေ့ မိမိမွေးနေ့တွေမှာ ညှပ်မိတဲ့ ဆံပင်တွေကို မကောင်းတဲ့ အောက်လမ်း၊ စုန်း၊ ကဝေ အစီအရင်တွေမှာ သုံးတဲ့အခါ ထိခိုက်မှုပိုများနိုင်လို့ပါ ။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်တော့ အဲ့ဒီ့နေ့တွေမှာ ဆံပင်ညှပ်မိရင် ဘုန်းကံနိမ့်နိုင်တာ ၊ ခိုက်တာ(မိသားစုအဆင်မပြေတာ၊ စီးပွားရေး ၊ … Read more
မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာ သတိုးသမီးဖခင်က သားမက်ကို ပြောလိုက်တဲ့စကား မှတ်သားထိုက်လို့မှတ်မိနေတယ်
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ တစ်ခုမှာ သတိုးသမီး ဖခင်က သားမက်ကို ပြောတယ်… သူမကို ပထမဆုံး ပွေ့ဖက်သူက ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူး သူမကို ပထမဆုံး နမ်းရှုံ့ခဲ့သူကလဲ ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူး သူမကို ပထမဆုံး ချစ်ခင်ခဲ့တာလဲ ငါပါ မင်းမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ သူမကို တစ်ဘဝလုံး လက်တွဲပေးရမယ့်သူကတော့ ငါမဟုတ်ဘူးကွာ အကယ်၍ တနေ့မှာ မင်းသာသူမကို မချစ်တော့ခဲ့ရင်သူမကို အပြစ်မဆိုပါနဲ့ မရိုက်နှက် မဆူဆဲပါနဲ့….. မချစ်နိုင်တော့ကြောင်း သူမကိူလဲ မပြောပါနဲ့ ငါ့ကိုပဲ လာပြောပါကွာ…ငါသူမကို အိမ်ပြန်ခေါ်သွားပေးပါမယ် အကယ်၍သာ သင်ဟာယောက်ျား တယောက်ဆိုရင် မိမိရဲ့ ဇနီးမယားကို ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံပါ…တန်ဖိုးထားပါ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သင်ယူထားတဲ့ မိန်းကလေးဟာ တခြားမိဘတွေရဲ့ တန်ဖိုးထားရတဲ့ သမီးလေးတွေမို့ပါပဲ… သမီး … Read more
မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့ အသက်(၇၀)ကျော်အဖိုးအိုနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဖြစ်ရပ် ဒီနေ့ ဂုဏ် သိက္ခာနဲ့မေတ္တာတရား ကိုလဲလှယ်ခဲ့တယ်… Busကားပေါ် ကျွန်မ တက်သွားတော့ လက်ထဲမှာပိုက်ဆံ၂ထောင် ပါလာတယ်….။ အလုပ်မှာထမင်းစားမှာက1800 ကားခက၂၀၀..ကွက်တိ ။ကားပေါ်မှာရှေ့ဆုံးခုံမှာနေရာရတယ်….။ အဲ့ဒီမှာ..ချောင်လေးမှာကုတ်ကုတ်လေးနဲ့..မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့. အသက်(၇၀)ကျော်ခန့် ရှိတဲ့အရမ်းဆင်းရဲချို့တဲ့ပုံရတဲ့အဘိုးတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့တယ် … ။ ကိုယ့်ေ ဘးမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေ ကိုဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်တော့အသက်ခပ် လတ်လတ်ပိုင်းတွေအများကြီး.. သူတို့ကို အာ့အဘိုးအိုကြီးကိုမမြင်ကြဘူးလားဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ အားမနာတမ်းကြည့်ပလိုက်မိတယ်။ တချို့ဆိုအဲ့အဘိုးအိုခြေထောက်တွေတောင်တက်နင်းကြတယ်။ဘေးနားကအန်တီကြီးကိုမေးကြည့်တော့ အဲ့တာ သူတောင်းစားကြီးလေ ဘယ်သူကသူ့ကိုခုံပေးမှာလဲရွံဖို့လဲကောင်းတာကိုးတဲ့… ကျွန်မ မစဉ်စားတော့ပဲချက်ခြင်းထပြီး ပါလာတဲ့ပိုက်ဆံ၂ထောင်လုံးပေးပြီး.. “ဘဘ လာ သမီးခုံလာထိုင်ဆိုပြီးတွဲခေါ်ပေးလိုက်တယ်…။ စိတ်ထဲမှာလဲ ငါ့အဖေအမေသာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးတွေ နဲ့မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်။ ကားခ၂ဝဝမရှိလို့ပါဆိုပြီးပြော စီးလာတယ်။ကားပေါ်မှာအသိတွေလဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်… ဒါမယ့်မရှက်ပါဘူး..အခုစာရေးနေတဲ့အချိန် ကျွန်မဖျားနေတယ်လေ…. အစာလွန်ပြီးဗိုက်တွေအောင့်လို့…ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျေနပ်မိတယ်…။ မူရင်း shinnkhyant Unicode Version မကျြရညျတှဝေဲနတေဲ့ အသကျ(၇၀)ကြျောအဖိုးအိုနဲ့ ဘတျဈကားပျေါက ဖွဈရပျ … Read more
ငွေကြေးသက်သာပြီး တိုက်နဲ့နေနိုင်မည့် ခိုင်ခံ့တဲ့ ဘိလပ်ထရံ ဆောက်လုပ်နည်း
ငွေကြေးသက်သာပြီး တိုက်နဲ့နေနိုင်မည့် ခိုင်ခံ့တဲ့ ဘိလပ်ထရံ ဆောက်လုပ်နည်း အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ ဘိလပ်ထရံ လုပ်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနည်းက အုတ်စီပြီး လုပ်သလောက်မကုန်ပါဘူး ရိုးရိုးထရံထက်နဲနဲပိုကုန်တယ်ဆိုပေမဲ့တစ်သက်တာ ခိုင်ခန့်တဲ့အတွက် အလုပ်သင်ဆုံးလိုယူဆပါတယ်။အပူဒါဏ်ကို လျှောချနိုင်ပြီး ကျမ္မာရေးနဲ့ညီညွတ်စေပါတယ် အချို့ဆိုရင် အိမ်သုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့ စောင်အစုပ် အင်္ကျီအစုပ်တွေကို နုတ်နုတ်စင်းပြီး ဘိလပ်နဲ့နယ်ပြင်အညီသံပြားထူထူပေါ်ပုံစံဖမ်းပြီးအိမ်အသုံးဆောင်တွေကိုလုပ်လာကြပါပြီ၊ မိမိတို့ဉာဏ်ရှိသလို အသုံးချနိုင်အောင်တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခိုင်ခန့်မူ့ မရှိ့ဘူး ရှိ့တယ်ဝေဖန်နေတာထက် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊ ဥပမာ စာပွဲခင်းဖြစ်စေမိမိအိမ်ကြမ်းခင်းဖြစ်စေ လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊ ခေတ်စနစ်တစ်ခုမှာ မိမိစမ်းသပ်မူ့သည် အကောင်းဆုံးလုပ်ကြည်ပါက ကမ္ဘာဈေးကွက်အထိထိုးဖောက်လာနိုင်ပါတယ်၊ ယ္ခုခေတ်တရုပ်ကတင်သွင်းတဲ့နံရံကပ်ကျောက်ပြားများသည်အမှိုက်သရိုက်များကိုခြေဖျက်ပြီးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဂျတ့်စက္ကူအဟောင်းများကို ခြေဖျက့်၍ ပြု့လုပ်ထားကြောင်းကျနော်လေ့လာထားပါတယ်တရုပ်တင်သွင်းသော နံရံကပ် ၈ပေ ၄ပေပြားများ လုပ်ထားပုံကိုလေ့လာကြည်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်သဲကိုရေစင်အောင်ဆေးပေးပါ သဲသုံးဒယ်ဘိလပ်တစ်ဒယ် ထည့်ပြီးသမမျှတအောင်နယ်ပါပြိုကျမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး၊ သူအိုးနဲ့သူဆန် တော်သင့်ယုံလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မေတ္တာများဖြင့် အေးချမ်းလုံခြုံစွာ နေနိုင်ရေး အသိပညာ အတတ်ပညာ များကို သိသမျှ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်၊ Unicode … Read more
မိဘတွေ မကြောက်ရတဲ့ သားသမီးဆိုတာ…
အိမ်ကိုလာလည်တဲ့သမီးလုပ်သူပြန်သွားတော့ဒေါ်မြတ်မွန်တစ်ယောက်သူ့ယောက်ျားကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ “အဖေကြီးရယ်အစောကကျမသမီးကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသမီးမကြိုက်ဘူးထင်တယ်မျက်နှာပျက်သွားတယ်။ ကျမလေခုအသက်ရလာတော့သားသမီးတွေကိုကြောက်လာတယ်။”ဒီစကားကိုဒေါ်မြတ်မွန်ရဲ့ခင်ပွန်းဦးထင်ကျော်ကကြားတော့ “အေးကွအမေကြီး ရသားသမီးတွေကကြီးလာတော့သူတို့ဘာသာရပ်တည်နိုင်မိဘတွေကအိုမင်းလာတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်မရပ်တည်နိုင်သူတို့ကိုမှီခိုစားသောက်နေထိုင်ရပြီ။ အဲလိုအခါမျိုးမှာမသိမလိမ်မာတဲ့သားသမီးတွေကမိဘကိုအရာမသွင်းမထီလေးစားလုပ်တော့တာ။ ဆူရင်ဆူ၊အော်ရင်အော်၊ငေါက်ရင်ငေါက်ပေါ့ကွာ။တို့မိဘတွေမှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့နေရကြောက်ရတာပေါ့ကွာ။ ဒါပေမဲ့နေပါအုန်း ကိုယ်တို့ကကိုယ့်အိမ်ကိုယ်နေကိုယ့်လုပ်စာကိုယ်စားနေတာအသက်ကြီးပြီဆိုပေမဲ့၆၀ကျော်သန်တုန်းမြန်တုန်းပါကွ••ဘာကြောက်ရမှာလဲ။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်နေပြီးကိုယ့်လုပ်စာကိုယ်စားနေတာသူတို့ကိုမှီခိုကပ်နေ၊စားနေရတာလဲမဟုတ်ကွာ။ကိုယ်ကတော့သားသမီးလုပ်စာစားရမှာသိပ်ကြောက်တာ။ ဒါကြောင့်သားသမီးကိုအားကိုးစရာမလိုဘဲနေနိုင်စားနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာ ဘာကြောက်စရာရှိလဲ။” ဦးထင်ကျော်ကမိန်းမဖြစ်သူအားမငယ်အောင်မာန်ပါပါပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်မြတ်မွန်က… “အဖေကြီးပြောတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်။ကျမကလေသားသမီးတွေကိုငယ်ကလိုကလေးလို့ပဲမြင်ပြီးမကြိုက်တာတွေ့ရင်ပြောချင်တယ်။ ဆိုစရာရှိရင်ဆိုချင်တယ်။မတ်တောနဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မကြိုက်ဘဲဖြစ်ပြီးပြန်ပြော၊ခံပြောနှတ်လှံထိုးမှာ၊ အဲလိုမဟုတ်တောင်သူတို့စိတ်ထဲကနေငြိုငြင်ပြီးသူတို့အပြစ်ဖြစ်မှာကိုကြောက်တာပါ။သူတို့ကိုကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။” သည်တော့မှဦးထင်ကျော်က”အော်သည်လိုလား•••အဲသည်လိုကြောက်ရင်ကြောက်ပါကွာအဲဒါမျိုးကတော့ကိုယ်လည်းကြောက်ပါတယ်။ တို့သိထားဖို့ကကိုယ့်သားသမီးတွေကိုငယ်စဉ်ကကလေးလိုပဲမြင်ပြီးသဘောထားပြီးအစစအရာရာလိုက်မပူလိုက်မပြောနဲ့တော့ပေါ့ကွာ သူတို့ကလည်းသူတို့အရွယ်ရောက်လာရှာလာနိုင်ကိုယ့်ဘာသာရပ်တည်လာနိုင်တော့ သူတို့မာနမာန်တွေရှိလာကြတယ်ကွ။ သူတို့သိတယ်တတ်တယ်နားလည်တယ်ပြောစရာမလိုဘူးလို့ဖြစ်လာတတ်တယ်။သားသမီးတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး အသိအလိမ်မာနည်းပါးတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့ကွာ။””အဲဒါဆိုကျမတို့ကအမြင်မတော်ရင်မပြောရတော့ဘူးလားကျမတို့ကမိဘတွေလေ။” “အေးပါကွာ မိဘဖြစ်နေပြီးသားသမီးလမ်းမှားတာကိုမပြောပြန်ရင်လည်းမိဘကောင်းမပီသရာကျတယ်။ အဲသည်တော့ကွာသူတို့မကြိုက်ဘူးထင်ရင် မြင်တိုင်းမပြောနဲ့မလွှဲမရှောင်သာမှပြောအရိပ်အခြေကြည့်ပြောပေါ့ဟုတ်ဘူးလား။” “ကောင်းပါပြီရှင်ငယ်တုန်းကတော့သူတို့ကမိဘဆူမှာရိုက်မှာငြိုငြင်မှာကြောက်ခဲ့ရတာ။ခုကျမတို့ကတစ်ခါပြန်ကြောက်ရတာပေါ့။ဟုတ်ဘူးလား။” ဒေါ်မြတ်မွန်ကထေ့သလိုပြန်ပြောလာတယ်။ဦးထင်ကျော်က… “သူတို့ကြောက်တာနဲ့တို့ကြောက်တာမတူပါဘူးကွာတို့ကသူတို့ငယ်ငယ်က သူတို့လေးတွေပညာမတတ်မှာကြီးလာရင်ကိုယ့်ဘာသာမရပ်တည်နိုင်မှာကြောက်ပြီးပြောခဲ့ဆူခဲ့ကြတာ။ ခုကြီးလာတော့မိဘကိုကလန်ကဆန်လုပ်ပြီးသူတို့အပြစ်ဖြစ်မှာကြောက်ရပြန်ရော။တို့ကကြောက်နေရတဲ့မိဘတွေပေါ့ကွာ။”ဆိုတော့ “အင်းပါ့လေ သူတို့ကိုမှီခိုကပ်ရပ်နေရလို့ကြောက်နေရတာနဲ့စာရင်ခုကြောက်ရတာကတော်ပါသေးတယ်။” ဒေါ်မြတ်မွန်တစ်ယောက်သဘောပေါက်သွားလို့ထင်ရဲ့မျက်နှာသေလေးနဲ့အခန်းထဲဝင်သွားပါတော့တယ်။ မိဘတွေမကြောက်ရတဲ့သားသမီးများဖြစ်ကြပါစေသော်…။ ။ Unicode Version အိမျကိုလာလညျတဲ့သမီးလုပျသူပွနျသှားတော့ဒျေါမွတျမှနျတဈယောကျသူ့ယောကျြားကိုလှမျးပွောလိုကျတယျ။ “အဖကွေီးရယျအစောကကမြသမီးကိုပွောလိုကျတဲ့စကားကိုသမီးမကွိုကျဘူးထငျတယျမကျြနှာပကျြသှားတယျ။ ကမြလခေုအသကျရလာတော့သားသမီးတှကေိုကွောကျလာတယျ။”ဒီစကားကိုဒျေါမွတျမှနျရဲ့ခငျပှနျးဦးထငျကြျောကကွားတော့ “အေးကှအမကွေီး ရသားသမီးတှကေကွီးလာတော့သူတို့ဘာသာရပျတညျနိုငျမိဘတှကေအိုမငျးလာတော့ကိုယျ့ဟာနဲ့ကိုယျမရပျတညျနိုငျသူတို့ကိုမှီခိုစားသောကျနထေိုငျရပွီ။ အဲလိုအခါမြိုးမှာမသိမလိမျမာတဲ့သားသမီးတှကေမိဘကိုအရာမသှငျးမထီလေးစားလုပျတော့တာ။ ဆူရငျဆူ၊အျောရငျအျော၊ငေါကျရငျငေါကျပေါ့ကှာ။တို့မိဘတှမှောမကျြနှာငယျလေးနဲ့နရေကွောကျရတာပေါ့ကှာ။ ဒါပမေဲ့နပေါအုနျး ကိုယျတို့ကကိုယျ့အိမျကိုယျနကေိုယျ့လုပျစာကိုယျစားနတောအသကျကွီးပွီဆိုပမေဲ့၆ဝကြျောသနျတုနျးမွနျတုနျးပါကှ••ဘာကွောကျရမှာလဲ။ ကိုယျ့အိမျကိုယျနပွေီးကိုယျ့လုပျစာကိုယျစားနတောသူတို့ကိုမှီခိုကပျနေ၊စားနရေတာလဲမဟုတျကှာ။ကိုယျကတော့သားသမီးလုပျစာစားရမှာသိပျကွောကျတာ။ ဒါကွောငျ့သားသမီးကိုအားကိုးစရာမလိုဘဲနနေိုငျစားနိုငျအောငျကွိုးစားခဲ့တာ ဘာကွောကျစရာရှိလဲ။” ဦးထငျကြျောကမိနျးမဖွဈသူအားမငယျအောငျမာနျပါပါပွနျပွောလိုကျပါတယျ။ဒျေါမွတျမှနျက… “အဖကွေီးပွောတာကတော့ဟုတျပါတယျ။ကမြကလသေားသမီးတှကေိုငယျကလိုကလေးလို့ပဲမွငျပွီးမကွိုကျတာတှရေ့ငျပွောခငျြတယျ။ ဆိုစရာရှိရငျဆိုခငျြတယျ။မတျတောနဲ့ပါ။ဒါပမေဲ့သူတို့မကွိုကျဘဲဖွဈပွီးပွနျပွော၊ခံပွောနှတျလှံထိုးမှာ၊ အဲလိုမဟုတျတောငျသူတို့စိတျထဲကနငွေိုငွငျပွီးသူတို့အပွဈဖွဈမှာကိုကွောကျတာပါ။သူတို့ကိုကွောကျတာမဟုတျပါဘူး။” သညျတော့မှဦးထငျကြျောက”အျောသညျလိုလား•••အဲသညျလိုကွောကျရငျကွောကျပါကှာအဲဒါမြိုးကတော့ကိုယျလညျးကွောကျပါတယျ။ … Read more
ကောကျရိုးမှို အလှယျအကူဆုံးနှငျ့ အကြိုးအရှိဆုံး စိုကျပြိုးနညျး
လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဝါးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောခြင်းအကျယ် ၁‘ ၊ အမြင့် ၂’ ကောက်ရိုး၁ အိတ်(တစ်တင်းခွဲအိတ်(သို့မဟုတ်)၂တင်းဝင်အိတ်၊ ၂-၃နာရီကြာရေစိမ်) ဗေဒါ၂-၃ ပြည် (နုတ်နုတ်စင်းပြီးသား) ၊ နွားချေးမှုန့်၂ ပြည် ၊ မျိုးထုပ်၁ ထုပ် ၊ ဖွဲနု၁ ဗူး (နို့ဆီဗူး) နေရာရွေးချယ်ရာတွင် သန့်ရှင်းပြီး ခြ ၊ ပုရွက်ဆိတ်ကင်းသောအခန်း(သို့)ခြံဝန်းအတွင်းနေရာကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ ခြံဝန်းအတွင်းဖြစ်ပါက အနည်းဆုံး အရိပ်ကျဲရရှိမည့်(ဥပမာ-ဘူးစင်အောက်၊ သစ်ပင်အောက်)နေရာဖြစ်ပြီး ၎င်းနေရာကို ထုံးဖြူးပေးရပါမည်။ ပထမဦးဆုံး မှိုမျိုးနှင့်ဖွဲ့နုကို ရော နယ်ပါ။ ရေစိမ်ထားသော ကောက်ရိုးကို ၆ပုံ ခွဲပုံပြီး ဗေဒါ၊ နွာချေး၊ မှိုမျိုးနှင့်ဖွဲ့နု(အရော)တို့ကို ၅ပုံစီ ခွဲထားပါ။ ခြင်းအတွင်းသို့ လေဝင် လေထွက် ကောင်း စေရန် နှင့် … Read more
၂လအတွင်း ဆံပင်၅လက်မရှည်စေသောနည်းလမ်း သင်က ၂ လအတွင်း ဆံပင်ကို နဂိုထက် ပိုမြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအကြောင်းအရာက သင့်အတွက်ပါပဲ။ ဆံပင်က အရှည်မြန်ဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်။ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရ စားသောက်မှု ပုံစံ နဲ့ ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်ပေးမှ ဆံပင်အရှည်မြန်မှာပါနော်။ သင်က ဆံသား ဂရုစိုက်မှု နဲ့ ဆံပင်ပိုရှည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်း (၂) မျိုးပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့- ဆန်ဆေးရည်နှင့် လိမ္မော်သီးအခွံပါ ပြုလုပ်ပုံကတော့ ဆန်ကို အညစ်ကြေးတွေ ပါသွားအောင် ရေဆေးပေးရပါမယ်။နှစ်ခါ ဝန်းကျင်လောက် ဆေးပြီးနောက် လိုအပ်တဲ့ပမာဏ တစ်ခွက်စာကို စစ်ထုတ်ပေးရပါမယ်။ ဆန်ဆေးရည်ကို အကြည်ပုံစံ ရသွားတဲ့အထိ ပိုမဆေးသင့်ပါဘူး။ အဖြူရောင် ဆန်ရည် ထွက်သင့်ပါတယ်။ပြီးနောက် မှာတော့ … Read more
(တစ်ချိန်ချိန်အသုံးဝင်လာမှာပါ /သင့်ဖုန်းထဲမယ် သိမ်းထားပါ) ၁။ ဆားအခတ်များသွားလျှင် အာလူးအလုံးလိုက် (၂/၄)လုံးထည့်ပါ။ ၂။ ပဲပြုတ်သည့်အခါ စားချင်သဖွယ်….အိအိဖောင်းဖောင်း စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်အောင် ရေလဲပြီးသောအခါ ရေအနည်ငယ် ထည့်၍ ထန်းလျက်(၂)လုံးခန့် ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ၃။ ကန်စွန်းရွက်ကို အစိမ်းရောင်လေး အတိုင်းပဲ စားချင်သဖွယ်ဖြစ်လိုပါက အဖုံးမအုပ်ပဲ ကြော်ပါ။ ၄။ ဒန်အိုးဒန်ခွက်များ ပြောင်စင်လိုပါက ဂေါ်ဖီထုတ်မှ အရွက်ကြမ်းဖြင့် ပွတ်တိုက်ပါ။ ၅။ လက်ဘက်ရည်အိုး၊ခွက်၊ အစွန်း အထေးများပြောင်စင်လိုပါကဆော်ဒါ(သို့မဟုတ်-လက်ချားအမှုန့်)ထည့်ပြီး ညသိပ်ထားပါ။ ၆။ အိမ်သာကြွေခွက်,ကျောက်ပြားများ သန့်ရှင်းလိုပါက လက်ချားမှုန့်နှင့်ရှောက်ရည် ရောစပ်ပြီး ပွတ်တိုက်ပါ။ ၇။ ယင်ပေါလျှင် ဖယောင်းတိုင် (၂)တိုင် ထွန်းပါ။ ၈။ အင်္ကျီကော်လံမှ ဆီချေးများကို ရှန်ပူခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်ပွတ်တိုက်လျှော်ပါ။ ၉။ ပုရွက်ဆိတ်မလာလိုသော်ကန့်မှုတ်ကို နည်းနည်းဖြူးပေးပါ။ ၁၀။ ဟင်းရဲ့အနံ့အသက် လက်မှာစွဲ … Read more
“သင်တစ်လဝင်ငွေ ၁၀ သိန်းရှိတဲ့ချိန်မှာ”ဒီစာလေးကို ဖတ်သွားပါ…
သင်တစ်လဝင်ငွေ ၁၀ သိန်းရှိတဲ့ချိန်မှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဝင်ထိုင်မိလို့ ၁/၂ သောင်းကုန်တဲ့ချိန်မှာ ဆိုင်ကဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ သင် Social Media ပေါ်မှာတင်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး သင်တစ်လဝင်ငွေ သိန်း ၁၀၀ ရှိတဲ့ချိန်မှာ LV brand ဝယ်သုံးတာကို အထူးအဆန်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး သင်တစ်လဝင်ငွေ သိန်း ၁၀၀၀ ရှိတဲ့ချိန်မှာ BMW ကားအကောင်းစားဝယ်စီးတာကို ပုံမှန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပဲလို့ သင်မြင်ပါလိမ့်မယ် ဘယ်အရာမဆို Level ရှိပါတယ်။ လူ့ဘဝလဲတူတူပါပဲ ။သဘာဝကိုက ခွဲခြားထားပြီးသားပါ။ Game ကစားရင်လဲ Level ရှိပါတယ်။ Rank လဲရှိပါတယ်။ အပေါ်ရောက်လေ လူတွေကအထင်ကြီးလေပါပဲ… Game မှာတောင်မှ Level မြင့်ချင်ရင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရပါတယ်။ ပုံမှန်သူတစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားက ဘယ်လောက်သွေးထွက်အောင်မှန်နေပါစေ လူတွေအလေးမပေးပါဘူး အောင်မြင်တဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကိုတော့ လူတိုင်းယုံကြည်လိုက်နာကြပါတယ်။ ဒီနေ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းရှိပါတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေမတူကြပါဘူး … Read more
သငျမသိသေးတဲ့ ကလေးပေါငျဒါရဲ့ အကွောငျးမြား
သင်မသိသေးတဲ့ ကလေးပေါင်ဒါရဲ့ ဘက်စုံအသုံးဝင်ပုံ ကလေးပေါင်ဒါရဲ့ ဘက်စုံအသုံးဝင်မှုများ ကလေးလေးတွေ အတွက် သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ ပေါင်ဒါတွေက အသားအရည် ထိခိုက်မှုလည်းမရှိသလို အနံ့လေးက အစ သင်းပျံ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးပေါင်ဒါကို ကလေးတွေအတွက် ပဲ လိမ်းတာမဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်လွယ်အသားအရေ ပိုင်ရှင်တွေအနေနှင့် လည်း အမွှေးအကြိုင်တစ်ခုအဖြစ် ထပ်မံ သုံးစွဲနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် ကလေးပေါင်ဒါက ကလေးတွေအတွက် အမွှေးအကြိုင်တစ်ခု ထပ်ပိုပြီး ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးစွဲ လို့ ရနိုင်သေးလည်းဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဖတ်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်။အနံ့ဆိုးထွက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးနိုင်ခြင်း အိမ်တိုင်းမှာ ဆောင်ထားသင့်တယ်အရာ တစ်ခုဆိုရင် တော့ ကလေးပေါင်ဒါကိုပဲ ညွှန်းရမှာပါပဲ။ အနံ့ဆိုးတွေ ထွက်လာတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ အဲ့ဒီ့နေရာတစ်ဝိုက် ကလေးပေါင်ဒါကို ခပ်နိုင်နိုင် ဖြူးပေးပြီး အနံ့အသက်ဆိုးတွေ ပျောက်ကင်းအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ် အသုံးဝင်တဲ့ … Read more